25 February, 2019 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Marxuum Cabdiraxmaan Cadow Maxamuud ayaa aha wada gaari oo ku safrayay qeyba kamid ah gobalka Shabeelada dhexe, waxa uu caan ka ahaa deeganada gobalkaasi, marxuumka ayaa istaagsanaa halka loogu tala galay hubinte gaadiidka ee ah meesha laga soo galo degmada Mahadeey ee goalka Shabeelada Dhexe, ciidamada amniga ee ku sugnaa goobta ayaa hubinyay gaariga iyo laba qof oo kale oo la socday balse nasiib xumo Dable Xoogga Dalka Cabduqaadir Maxamuud Cali ayaa ka soo toogtay meel fogaan u jirto taasi oo sababtay geerida Marxuumka.
Afar cisha kadib ayaa markale loo ballamay fadhiga Maxkamadda, waxa ayna xafiiska Xeer Ilaalinta soo bandhigeen , Qiraalka eedeysanah, Markaatiyaal gaariga la saarnaa marxuumka, Warqadda cadeynta dhimashada oo ku lifaaqan sawirka Marxuuumka iyo qoreygii lagu toogtay Marxuum Cabdiraxmaan Cadow Maxamuud.
Dhamme Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa ku dooday in eedeysanaha oo ku liif bartay Marxuumka maadaama aysan jirin sabab qasbeyso in uu toogto muwaadin marayay hubinta howlaha nabad-gelyada, waxa uuna weydiistay garsoorayaasha in lagu xukumo dil toogasha ah. Iyadoo dhanka kale Qareenada u doodayay eedeysanaha ayaa ku doodeen in loo fududeeyo maadaamaa qiraal uu yahay eedeysanaha oo ay bixiyaan magta marxuumka.
Garsoorayaasha ayaa maalintaas soo xiray fadhiga Maxkaamdda, waxaana ku dhawaad bil kadib ay maanta go’aan kasoo saareen dhageysiga dacwadda loo heystay, Dable Xoogga Dalka Cabduqaadir Maxamuud Cali, waxa ayna Maxkamadda ku xukuntay dil-toogasha ah oo ah qisaasta Marxuum Cabdiraxmaan Cadow Maxamuud, sida uu u sheegay warbaahinta Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida.
Xukunsanaha ayaa heysta Fursad kale oo uu ku dalban karo Rafcaan hadii uusan ku qancin xukunka Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida.
Laba qof oo xalay oo lagu dilay degmada Dharkeenley ee Gobolka Banaadir
Maxkamad xukun ku riday Sarkaal ka tirsanaa dowladii Siyaad Barre
Guddoomiye Waaxeed xalay lagu dilay Muqdisho
Bajaajle waday haweenay fool aheyd oo Muqdisho lagu dilay
Qaramada Midoobey oo sheegtay in qaraxyada Al-shabab lagu sameeyo gudaha dalka
Mareykanka oo faah faahiyey duqeyn uu ka fuliyey Shabeellaha Hoose Visits: 6